Ngaba Uhambisana Nentlangano KaYehova? | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Amehlo kaYehova aphezu kwabo bangamalungisa.”—1 PET. 3:12.
Yintoni aza kuyenza uYehova ngeenzame zikaSathana zokutshabalalisa abantu bakhe?
Ziintoni uThixo afuna abantu bakhe bazenze?
Kutheni simele siqhubeke sihambisana nentlangano kaYehova?
1. Yiyiphi intlangano eyathabathel’ indawo uSirayeli owexukileyo yaza yabizwa ngegama likaYehova? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
NGUYEHOVA owaseka ibandla lamaKristu ngenkulungwane yokuqala noye wabuyisela unqulo lokwenyaniso kule mihla. Njengoko sele kubonisiwe kwinqaku elingaphambili, endaweni yesizwe sikaSirayeli esiwexukileyo, yaba ngabalandeli bakaKristu bokuqala ababizwa ngegama likaYehova. Le ntlangano intsha, eyayithandwa nguThixo, yasinda xa kwatshatyalaliswa iYerusalem ngo-70 C.E. (Luka 21:20, 21) Ezo ziganeko zenkulungwane yokuqala zazibonisa into eyayiza kwenzeka kubakhonzi bakaYehova kule mihla yethu. Inkqubo kaSathana iza kutshatyalaliswa kungekudala, kodwa intlangano kaThixo iza kusinda. (2 Tim. 3:1) Yintoni esiqinisekisayo ngaloo nto?
2. Wathini uYesu ‘ngembandezelo enkulu,’ ibe iza kuqalisa njani?
2 Xa wayethetha ngokupheliswa kwale nkqubo yezinto, uYesu wathi: “Kuya kubakho imbandezelo enkulu ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwehlabathi de kube ngoku, nekungasayi kubakho injengayo kwakhona.” (Mat. 24:3, 21) Le mbandezelo iza kuqalisa xa uYehova esebenzisa amagunya ezopolitiko ukutshabalalisa “iBhabhiloni Enkulu,” ingqokelela yazo zonke iicawa zonqulo lobuxoki. (ISityhi. 17:3-5, 16) Yintoni eza kulandela emva koko?
UKUHLASELA KUKASATHANA KUKHOKELELA KWIARMAGEDON
3. Emva kokutshatyalaliswa konqulo lobuxoki, yintoni eza kwenzeka kubakhonzi bakaYehova?
3 Emva kokutshatyalaliswa konqulo lobuxoki, uSathana nehlabathi lakhe baza kuhlasela abakhonzi bakaYehova. Xa iprofeta ‘ngoGogi welizwe lakwaMagogi,’ iBhayibhile ithi: “Uya kungena njengesaqhwithi. Uya kuba njengelifu ekugubungeleni ilizwe, wena nawo onke amabutho akho nezizwana ezininzi ezikunye nawe.” Ekubeni amaNgqina kaYehova engenazixhobo zakulwa ibe engabantu boxolo, aya kubonakala ezizisulu zokuhlaselwa. Kodwa nabani na owahlaselayo, uya kube ezinqikel’ ilitye elineembovane!—Hez. 38:1, 2, 9-12.
4, 5. Yintoni aza kuyenza uThixo ngeenzame zikaSathana zokutshabalalisa abantu bakhe?
4 Yintoni aza kuyenza uThixo ngezi nzame zikaSathana zokutshabalalisa abantu bakhe? Ekubeni enguMongami Wendalo, uYehova uza kungenelela. Kaloku emehlweni kaYehova, abantu abahlasela abakhonzi bakhe bafana nabahlasela yena. (Funda uZekariya 2:8.) Ngoko uBawo wethu osezulwini akayi kulibazisa ukusihlangula. Loo ntlangulo iya kufikelela incopho yayo xa kutshatyalaliswa ihlabathi likaSathana eArmagedon, “kwimfazwe yemini enkulu kaThixo uSomandla.”—ISityhi. 16:14, 16.
5 Xa sithetha ngeArmagedon, isiprofeto seBhayibhile sithi: “‘UYehova ubambene neentlanga. Umele ngokobuqu agwebe inyama yonke. Ke bona abangendawo, umele abanikele ekreleni,’ utsho uYehova. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Khangela! Kuphuma intlekele eluhlangeni ukusa eluhlangeni, nesivuthuvuthu esikhulu siya kuvuswa kweyona mimandla ithe qelele yomhlaba. Yaye abo babuleweyo nguYehova ngaloo mini ngokuqinisekileyo baya kususela kwesinye isiphelo somhlaba base kwesinye isiphelo somhlaba. Abayi kwenzelwa sijwili, bengayi kuhlanganiswa okanye bangcwatywe. Baya kuba njengomgquba phezu komhlaba.’” (Yer. 25:31-33) IArmagedon iza kuthetha isiphelo sale nkqubo yezinto. Ihlabathi likaSathana liza kutshabalala, kodwa inxalenye esemhlabeni yentlangano kaYehova iza kusinda.
ISIZATHU SOKUBA INTLANGANO KAYEHOVA ISANDA
6, 7. (a) Bavela phi abantu ababumba “isihlwele esikhulu”? (b) Lungakanani ulwando oluye lwakho kwiminyaka yakutshanje?
6 Intlangano kaThixo iqhubeka isanda ngenxa yokuba abantu abakuyo bayathandwa nguye. IBhayibhile isiqinisekisa ngala mazwi: “Amehlo kaYehova aphezu kwabo bangamalungisa, neendlebe zakhe zisingisele esikhungweni sabo.” (1 Pet. 3:12) ‘Amalungisa’ aquka “isihlwele esikhulu,” ‘esiphuma embandezelweni enkulu.’ (ISityhi. 7:9, 14) La malungisa akuthiwa nje ‘asisihlwele.’ Kunoko, kuthiwa ‘sisihlwele esikhulu’—inyambalala yabantu. Ngaba nawe uzibona usinda ‘kwimbandezelo enkulu’?
7 Bavela phi aba bantu babumba isihlwele esikhulu? Baqokelelwa ngenxa yomsebenzi wokushumayela oyinxalenye yomqondiso wobukho bukaYesu. Wathi: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.” (Mat. 24:14) Kule mihla yokugqibela, lo ngowona msebenzi uphambili owenziwa yintlangano kaThixo. Ngenxa yomsebenzi wokushumayela nokufundisa owenziwa ngamaNgqina kaYehova ehlabathini lonke, izigidi zabantu ziye zafunda ukunqula uThixo “ngomoya nenyaniso.” (Yoh. 4:23, 24) Ngokomzekelo, kwisithuba seminyaka elishumi—ukususela kunyaka wenkonzo ka-2003 ukusa koka-2012—abantu abangaphezu kwe-2 707 000 baye bazahlulela kuThixo baza babhaptizwa. Ehlabathini lonke, kukho amaNgqina kaYehova angaphezu kwe-7 900 000, ibe izigidi ezingakumbi zinxulumana nawo, ingakumbi ngexesha leSikhumbuzo. Asiqhayisi ngala manani, kuba ‘nguThixo okhulisayo.’ (1 Kor. 3:5-7) Sekunjalo, kuyabonakala ukuba isihlwele esikhulu siyakhula ibe siya sisanda nyaka ngamnye.
8. Lubangelwa yintoni ulwando kwintlangano kaYehova kule mihla?
8 Inani lamaNgqina belisoloko lisanda ngenxa yokuba axhaswa nguYehova ngokwakhe. (Funda uIsaya 43:10-12.) Olu lwando lwachazwa sesi siprofeto: “Omncinane uya kuba liwaka, nophantsi abe luhlanga olunamandla. Mna, Yehova, ndiya kukukhawulezisa oko ngexesha lako.” (Isa. 60:22) Intsalela yabathanjiswa yayikhe yaba ‘njengomncinane,’ kodwa inani layo lakhula njengoko abanye abathanjiswa babengena kwintlangano kaThixo. (Gal. 6:16) Ngenxa yentsikelelo kaYehova, olu lwando lusaqhubeka ngenxa yokuqokelelwa kwesihlwele esikhulu.
OKO UYEHOVA AKUFUNAYO KUTHI
9. Yintoni esimele siyenze ukuze sixhamle kwikamva eliqaqambileyo esilithenjiswe kwiLizwi likaThixo?
9 Kungakhathaliseki ukuba singamaKristu athanjisiweyo okanye isihlwele esikhulu, sinokuxhamla kwikamva eliqaqambileyo esilithenjiswe kwiLizwi likaThixo. Noko ke, kufuneka siqale sithobele uYehova. (Isa. 48:17, 18) Cinga nje ngamaSirayeli awayephantsi koMthetho kaMoses. Lo Mthetho wawuwakhusela, uwafundisa ngendlela yokuziphatha, ukuba neentsapho ezonwabileyo nabahlobo, ukuqhuba amashishini ngokunyaniseka nokuphatha abanye ngobubele. (Eks. 20:14; Lev. 19:18, 35-37; Dut. 6:6-9) Ukuthobela uYehova kusinceda ngendlela efanayo—ibe asikujongi njengendinisa ukwenza ukuthanda kwakhe. (Funda eyoku-1 kaYohane 5:3.) Kanye njengokuba uMthetho wawuwakhusela amaSirayeli, ukuthobela imithetho nemigaqo kaYehova uThixo akwaneli nje ukusikhusela, kodwa kusigcina ‘siphila elukholweni.’—Tito 1:13.
10. Kutheni sifanele sizibekele ixesha lokufunda iBhayibhile size senze uNqulo Lwentsapho veki nganye?
10 Inxalenye esemhlabeni yentlangano kaYehova ihambela phambili ngeendlela ezininzi. Ngokomzekelo, siya siyiqonda bhetele iBhayibhile. Yinto elindelekileyo le, kuba “umendo wamalungisa unjengokukhanya okuqaqambileyo okuya kukhanya ngokukhanya de kube semini emaqanda.” (IMize. 4:18) Kodwa simele sizibuze oku: ‘Ngaba ndihambisana nendlela entsha ezicaciswa ngayo iZibhalo? Ngaba ndiyifunda yonke imihla iBhayibhile? Ngaba ndiyakuthanda ukufunda iincwadi zethu? Ngaba mna nentsapho yam silwenza veki nganye uNqulo Lwentsapho?’ Akunzimanga ukwenza ezi zinto, nto nje kufuneka sizibekele ixesha lazo. Kubaluleke ngokwenene ukufunda iZibhalo, siphile ngokuvisisana nazo size sihambisane nentlangano kaThixo—ingakumbi njengokuba imbandezelo enkulu isondele!
11. Imithendeleko yamandulo kunye neentlanganiso neendibano zale mihla ziye zaba luncedo njani?
11 Intlangano kaYehova isikhuthaza ukuba siphulaphule esi siluleko sikaPawulos: “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye, njengoko kulisiko labathile ukwenjenjalo, kodwa masikhuthazane, ngokungakumbi njengoko nibona ukuba imini iyasondela.” (Heb. 10:24, 25) Ukholo lwamaSirayeli lwalusomelezwa yimithendeleko eyayisenziwa minyaka le nazezinye iindibano zokunqula uThixo. Ngaphezu koko, izihlandlo ezinjengoMthendeleko Weminquba ngemihla kaNehemiya zazisonwabisa. (Eks. 23:15, 16; Neh. 8:9-18) Kuba njalo nakuthi xa siye kwiintlanganiso nakwiindibano zethu. Ngamana singawaxhakamfula ngazo zozibini la mathuba asinceda sisondele kuYehova size sihlale sonwabile.—Tito 2:2.
12. Sifanele sikujonge njani ukushumayela iindaba ezilungileyo?
12 Ukuba yinxalenye yentlangano kaThixo kusinika ulonwabo lokuba nenxaxheba “kumsebenzi ongcwele weendaba ezilungileyo zikaThixo.” (Roma 15:16) Ukwenza lo ‘msebenzi ungcwele’ kusenza ‘abasebenzi abangamadlelane aLowo Ungcwele,’ uYehova. (1 Kor. 3:9; 1 Pet. 1:15) Ukushunyayelwa kweendaba ezilungileyo kunegalelo ekungcwalisweni kwegama likaYehova elingcwele. Alikho ilungelo elinokulinganiswa nelokuphathiswa ‘iindaba ezilungileyo nezizukileyo zoThixo onoyolo.’—1 Tim. 1:11.
13. Ubuhlobo bethu noThixo kunye nobomi bethu buxhomekeke entweni?
13 UThixo ufuna kulungelwe thina, yiloo nto efuna sihlale sisondele kuye nakwintlangano yakhe. UMoses wathi kumaSirayeli: “Ndimisela amazulu nehlabathi namhlanje njengamangqina am okuba, ndibeke phambi kwakho ubomi nokufa, intsikelelo nesiqalekiso; nyula ke ubomi ukuze uphile, wena nenzala yakho, ngokuthi umthande uYehova uThixo wakho, uliphulaphule ilizwi lakhe, unamathele kuye; ngokuba ububomi bakho nokolulwa kwemihla yakho, ukuze uhlale emhlabeni lowo uYehova awafunga kookhokho bakho uAbraham, uIsake noYakobi ukuba wobanika wona.” (Dut. 30:19, 20) Ubomi bethu buxhomekeke ekwenzeni ukuthanda kukaYehova, simthande, simthobele size sihlale sisondele kuye.
14. Wayevakalelwa njani omnye umzalwana ngenxalenye esemhlabeni yentlangano kaYehova?
14 UMzalwana uPryce Hughes, owahlala esondele kuThixo nakwintlangano yakhe, wakha wathi: “Ndinombulelo kuba bendisoloko ndiyiqonda injongo kaYehova ukususela ngemihla yangaphambi ko-1914 . . . Eyona nto ebisoloko ibalulekile kum, kukunamathela kwintlangano kaYehova. Amava am andifundise indlela ekububudenge ngayo ukuthembela kwiimbono zabantu. Ndathi ndakuyiqonda loo nto, ndazimisela ukunamathela kule ntlangano ithembekileyo. Kaloku yiyiphi enye indlela umntu anokusikelelwa ngayo nguYehova?”
QHUBEKA UHAMBISANA NENTLANGANO KATHIXO
15. Yenza umzekelo weZibhalo obonisa indlela esimele silujonge ngayo utshintsho kwindlela esiyiqonda ngayo iBhayibhile.
15 Ukuba sifuna ukusikelelwa nguYehova, simele siyixhase intlangano yakhe size silwamkele utshintsho kwindlela esiziqonda ngayo iZibhalo. Cinga nje ngoku: Emva kokufa kukaYesu, kwakukho amawaka amaKristu angamaYuda awayewuthobela ngokungqongqo uMthetho kaMoses, ekufumanisa kunzima ukwahlukana nawo. (IZe. 21:17-20) Noko ke, ileta uPawulos awayibhalela amaHebhere yawanceda aqonda ukuba ayengangcwaliswanga ngenxa yemibingelelo “enikelwa ngokuvumelana noMthetho,” kodwa “ngokunikelwa komzimba kaYesu Kristu kwaba kanye.” (Heb. 10:5-10) Alithandabuzeki elokuba, inkoliso yala maKristu angamaYuda yatshintsha indlela yayo yokucinga. Nathi simele silifundisise iLizwi likaThixo size samkele naluphi na utshintsho olwenziwayo kwindlela esiliqonda ngayo nakumsebenzi wokushumayela.
16. (a) Ziziphi iintsikelelo eziya kwenza kube mnandi ukuphila kwihlabathi elitsha? (b) Yintoni okhangele phambili kuyo kwihlabathi elitsha?
16 Bonke abantu abahlala benyanisekile kuYehova nakwintlangano yakhe baya kusikelelwa nguye. Abathanjiswa abathembekileyo baya kufumana ilungelo lokulawula kunye noKristu ezulwini. (Roma 8:16, 17) Ukuba unethemba lokuphila emhlabeni, cinga nje ngendlela ekuya kuba mnandi ngayo eParadesi. Ekubeni siyinxalenye yentlangano kaYehova, kusivuyisa ngokwenene ukuxelela abanye ngehlabathi elitsha esilithenjiswe nguThixo! (2 Pet. 3:13) INdumiso 37:11 ithi “abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.” Abantu “baya kwakha izindlu baze bahlale” kuzo yaye baya kunandipha ‘umsebenzi wezandla zabo.’ (Isa. 65:21, 22) Iya kuphela yonke ingcinezelo, ubuhlwempu kunye nendlala. (INdu. 72:13-16) IBhabhiloni Enkulu ayisayi kuphinda ikhohlise mntu, kuba iza kube ingasekho. (ISityhi. 18:8, 21) Abafileyo baya kuvuswa baze banikwe ithuba lokuphila ngonaphakade. (Isa. 25:8; IZe. 24:15) Izigidi zabantu eziye zazahlulela kuYehova zilindelwe likamva eliqaqambileyo! Ukuze sixhamle kwezi zithembiso ziseBhayibhileni, simele siqhubeke sisondela kuThixo size sihambisane nentlangano yakhe.
Ngaba uyazibona useParadesi? (Funda isiqendu 16)
17. Simele sivakalelwe njani ngokunqula uYehova nangentlangano yakhe?
17 Ekubeni isiphelo sale nkqubo sele sisemnyango, masizimisele ukuhlala sinokholo olomeleleyo size sinqule uYehova ngokunyaniseka. Wayezimisele ukwenza kanye loo nto umdumisi uDavide, owathi: “Inye into endiyicelileyo kuYehova—ndiya kufuna yona—ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, ndibone ukuthandeka kukaYehova ndize ndikhangele ngoxabiso etempileni yakhe.” (INdu. 27:4) Ngamana sonke singanamathela kuThixo nakubantu bakhe size siqhubeke sihambisana nentlangano kaYehova.
IMBONISELO—EFUNDWAYO Meyi 2014